Fifaninanana Bande dessin�e
Ankizy 72 no nandray anjara
Notontontosaina ny faha 30 ny volana aprily 2014 tao amin’ny CEG Ratsimilaho ny fifaninanana Bande dessin�e izay nokarakarany Plat forme DIO Rano WASH eto amin’ny faritra Atsinanana, araka ny nambaran’ny mpandrindram-paritra Docteur RAKOTO, ny tanjona dia ny fanehoana ny hafatra telo amin’ny fampiasana ny rano fisotro madio.
Eo ihany koa ny fanaovana sary mba hoentina hanaovana fanentana eo amin’ny Ray aman-dReny sy ny fiarahamonina ary ny mpitondra fanjakana. Fantatra ary fa ankizy 72 no nandray anjara, zay avy amin’ny sekoly miankina sy tsy miankina eto Toamasina, ka salantaona 10 ka hatraminy 17 taona no afaka nanao izany.
Nilaza ireo ankizy nandray anjara fa zava-dehibe ny fahazaona ny rano fisotro madioa. Ireo ankizy nandray anjara dia samy manana nofinofy ho mpanao sary hosy doko malaza erantany ny ankabetsahan’izy ireo.
(32) Prud′Homme RAKOTOSON : 03-05-2014 - 10:00